Al-Shabaab oo war kasoo saartay dilalkii Cabdi Bariise iyo Qoobey iyo sarkaal kale - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo war kasoo saartay dilalkii Cabdi Bariise iyo Qoobey iyo sarkaal...
Muqdisho (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale dib u bilowday dilalkii toogashada ahaa oo ay ka fulin jirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayada oo sida ay sheegtay dishay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska.
Dilalkan ayey Al-Shabaab ka fulisay degmooyinka Dharkeynleey iyo Hodan.
Dabley hubaysan ayaa maanta duhurkii agagaarka saldhig Galbeed ee degmada Dharkeynleey ku dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada booliska dowladda Federaalka, oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Bariise, wuxuuna ahaa laba xidigle.
Weerar kale oo isna ka dhacay xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodon ayaa lagu dilay sarkaal ciidan oo magaciisa lagusoo gaabiyay Qoobeey, sida ay sheegatay Al-Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxaha dilka geystay ay u suurtagashay inay sarkaalka ay ku toogteen Hodan ay ka qaataan qori noociisa ahaa AK47.
Sidoo kale, weerar ay Al-Shabaab xalay ku qaadeen xaafadda Gubta, gaar ahaan Ciise Cabdi, ayaa sababay dhimashada sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada Dayniile, sida ay ku sheegteen qoraal ay soo dhigeen warbaahintooda.
Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka nasatay falalkii dilalka qorsheysan ahaa oo ay kooxda Al-Shabaab ka fulin jirtay magaalada kadib markii ay hey’adaha amniga dhowr jeer toogteen kooxo dilal fuliyey.